त्रिवि सेवा आयोग अध्यक्षसहित क-कसले दिए नातेदारलाई जागिर ? - News Portal of Global Nepali
त्रिवि सेवा आयोग अध्यक्षसहित क-कसले दिए नातेदारलाई जागिर ?
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको खुला प्रतिस्पर्धामा त्रिविकै उच्च पदाधिकारी, विद्यार्थी संघ-संगठन र नेताका नातेदारहरूको नाम निस्किएको छ ।
लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेमा धेरैजसो पहुँचवालाका आफन्त परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा यसबारे उजुरी परेको छ । त्रिविका कर्मचारी संघ-संगठन र परीक्षामा सहभागी केही विद्यार्थीले आयोग, केन्द्र, कुलपति, उपकुलपति कार्यालयलगायतत्रिविकै विभिन्न निकायमा समेत उजुरी दिएका छन् ।
आयोग कार्यालयबाट प्राप्त एक सूचीमा अध्यक्ष शर्माकी भतिजी पार्वती सापकोटाको नाम शाखा अधिकृत र मुख्य कार्यालय सहायक दुवै पदमा निस्केको छ । उनले भतिजीसहित भनसुनका आधारमा अन्य आफन्त र चिनजानका व्यक्तिको समेत नाम निकाल्न सफल भएको स्रोतको दाबी छ । कान्तिपुर दैनिकमा खरब छ ।
स्वास्थ्य सेवाका समायोजन प्रक्रिया छिटो सम्पन्न हुन्छ : मन्त्रालय
नेकपामा नयाँ समीकरण
मोबाइल चोरेको आरोपमा दुई घण्टासम्म निर्घात कुटपिट (भिडियो)
घुस लिएको आरोपमा गोङ्गबुमा कार्यरत चार प्रहरी जवान समातिए
पुलिसलाई कुटपिट काण्डमा पारसले मुख खोले
एनआरएनए मुख्यालयमा राष्ट्र बैंकको कार्यालय